dayniile » Diidmadii Shillin Soomaaliga oo Keentay Isticmaalka Lacagta Birta Itoobiya
Diidmadii Shillin Soomaaliga oo Keentay Isticmaalka Lacagta Birta Itoobiya
Wararka ka imaanaya Degmada Cabud-waaq ee Gobolka Galgaduuud ayaa ku waramaya in muran ka dhashay isticmaalka lacagta shilin soomaaliga in uu keenay in degmadaas laga isticmaalo lacagta Birta Itoobiya.
Gudoomiye ku-xigeenka Degmada Cabud-waaq ee Gobolka Galgaduuud Muuse Inji oo la hadlay idaacadda Simba ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhowrkii maalin aynu soo dhaafnay uu jirey muranka ku aadan iscticmaalka lacagta shilling Soomalida, islamarkaana markii dambe go’aan lagu gaaray in degmadaas laga isticmaalo lacagta Birta Itoobiya.
“Lacagta Birta Itoobiya oo qiimo ahaan ka jaban lacagta Shillin Soomaliga ayaa haatan laga isticmaalaa gudaha Degmada Cabud-waaq ee Gobolka Galgaduud,dhowrkii maalin aynu soo dhaafnay muran ayaa ka taagnaa isticmaalka lacagta, balse haatan inta badan degmada waxaa laga isticmaalaa lacagta Birta Itoobiya”, ayuu yiri Gudoomiye ku-xigeenka Degmada Cabud-waaq Muuse Inji.
Sidoo kale Gudoomiye ku-xigeenka Degmada Cabud-waaq ee Gobolka Galgaduuud Muuse Inji ayaa sheegay in haatan xaaladdda degmada ay tahay mid aad u wanaagsan,islamarkaana laga gudbay murankii ka taagnaa isticmaalka lacagta.
Degmada Cabud-waaq ee Gobolka Galgaduuud ayaa ku dhow dhanka ismaamulka Soomalida Ethopia waxaa jira Ganacsato alaabooyin u iib geeya gudaha dalkaas iyo kuwa ka keena oo ganacsiyo ku leh Gobolada Dhexe ee dalka.